Rose of Sharon: ဆယ်ကျော်သက်ရင်ခုန်သံ (ပစ်ကလေးရဲ့တဂ်ပို့စ်)
Posted by rose of sharon at 10:58 AM
Ma Tint November 10, 2014 at 11:39 AM
တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ အတိတ်ရဲ့ဖြစ်ရပ်လေးတွေ ဖတ်သွားပြီ မနော်...
ဖူးစာရှင်မှန်မှ ဆုံကြရတာမို့ အေးချမ်းတဲ့ဘ၀လေးရဘို့ အကြောင်းဖန်လာတာပေါ့ကွယ်။
rose of sharon November 11, 2014 at 9:57 AM
Anonymous November 10, 2014 at 11:50 AM
အမသူငယ်ချင်းတယောက်လဲ ကျောင်းပိတ်ချိန် အလယ်က ကောင်မလေးသူငယ်ချင်းတယောက်က စာတွေဖျောက်ပစ်ပြီး ၂ ဘက်စလုံးကို သတင်းမှားတွေ ပေးလို့ လွဲသွားရဖူးတယ်။ အမ သိတဲ့အချိန်မှာ အတော်နောက်ကျသွားပြီ။ တလောက မြန်မာပြည် ပြန်လည်တုန်းက ကောင်လေးဘက်ကိုတော့ ပြောပြလိုက်တယ်။ သူက လူပျိုကြီးအဖြစ် ရှိတုန်း။ ကောင်မလေးဘက်ကိုတော့ ခုထိ မဆုံဖြစ်သေးဘူး။
rose of sharon November 11, 2014 at 9:58 AM
ဇွန်မိုးစက် November 10, 2014 at 12:41 PM
ကြားလေသွေးလို့ ဝေးခဲ့ရတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်က ရင်ခုန်သံအကြောင်း လာနားထောင်သွားတယ်။
ဆွေလေးမွန် November 10, 2014 at 2:41 PM
ရင်ခုန်သံတွေ အေးခဲ ခဲ့ကြတာ ကြားလေသွေးလို့ ကိုး.
rose of sharon November 11, 2014 at 9:59 AM
ကိုဇော် November 10, 2014 at 2:57 PM
လူတွေမှာ အဲသလိုတွေက များတယ်။ အင်းလေ ပြီးတာတွေလည်း ပြီးပါပြီ။
ကျေးဇူးရှင်ဝေ :D :D
rose of sharon November 11, 2014 at 10:00 AM
blackroze November 11, 2014 at 12:50 AM
ချစ်သူခြင်း ဖူစာမပါလို့လွဲတာ လက်ခံနိုင်ပေမဲ့
ဝေ..ဆိုတဲ့အမျိုး သမီးတော်တော် ပက်စက်တာဘဲ..
ပစ် မုန်းတယ် သူ့ကို ...
အဲလိုကြားကနေ ခလောက်ဆန်တတ်သူတွေကို အရမ်းမုန်းတယ်..
မကြီးရဲ့ အိပ်ပျက်ညလေးကတော့ရင်ထဲ နင့်ကနဲပါဘဲ..
( ပစ်tag တာလေးရေးပေးလို့ကျေးဇူးပါအမ )
Thu November 11, 2014 at 12:45 PM
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! November 11, 2014 at 1:12 PM
အဲ့လို အဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခု ညီမလေး တို့သူငယ်ချင်းထဲမှာ ဖြစ်ပျက်ဘူးခဲ့တယ်မမ ... တိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိလို့ အတိတ်ဟောင်းလေးတွေကိုတောင် သတိရသွားပြီမမရေ.. :)
မြတ်ကြည် November 11, 2014 at 3:05 PM